Sonic Assault - Online
နေအိမ် » လှုပ်ရှားမှု » Sonic Assault
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Sonic Assault
ဖေါ်ပြချက်: Free-Online-Action.com Sonic အားဖြင့်ပစ်ခတ်မှုဒြပ်စင်နှင့်အတူစွဲလမ်းအခမဲ့ Arcade ဂိမ်းထဲမှာနယူး Sonic Adventures အသေနတ်တွေနဲ့တွားနှင့်ပျံရန်သူများကို repulses ။ သငျသညျ5ဘဝတွေကိုရှိသည်။ စိတျနှလုံးမှာဘဝဆုကြေးငွေရိုက်ကူးရရန်။
ကစား: 95,567 tag ကို: Sonic ဂိမ်း, Sonic
Sonic ကား Champ ဂိမ်း
သူ၏အဆွေခင်ပွန်းသင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်ကိုရွေးချယ်ပါနဲ့မြန်သငျသညျအစာရှောငျအရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့်ပျော်စရာရှိသည်အသစ်ဇာတ်ကောင်များနှင့်အဆင့်ဆင့်သော့ဖွင့်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်အာနိသင်တိုးမြှင့်ကိုသုံးကျော်သင်သည်မည်သည့်ပြိုင်ဘက်မီကယူနိုင်ပါတယ်အဖြစ်မောင်းနှင့်အတူ Sonic ပြိုင်ကားဖြစ်ပါတယ်!
Sonic ပြိုင်ပွဲ၌, သင်တစ်ဦးရုံးတင်စစ်ဆေးစက်ဘီးပြိုင်ဆိုင်မှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်သင့်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်ကိုရှေးခယျြဖို့ရှိသည်။ အခြားပြိုင်ကားသမားဦးထဲကယူရှေ့တော်၌ထိုလမ်းကြောင်းဖြည့်စွက်, သင်ကကြာသောအရာကိုရှိသလား ကံကောင်းပါစေအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, အထက်, ပျော်စရာရှိသည် !! သင့်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်မှယာဉ်မောင်း
Sonic နှင့် Akako ယခုသင့်ထရပ်ကား sellect အပေါင်းတို့သည်အံ့သြဖွယ် 10 အဆင့်ဆင့် Play နှင့်စစ်မှန်သောဆုရှင်ဖြစ်လာ, ထရပ်ကားနောက်တဖန်အသီးအသီးအခြားပြိုင်ကားကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Sonic အိမ်ပြန်ဖို့လမ်းကိုရှာဖွေကိုကူညီပါ။ လမျး၌သငျသညျ Sonic အားလုံးအချက်တွေကိုစုဆောင်းအပေါင်းတို့သည်ရန်သူကိုသတ်အံ့ကူညီအများအပြားစက်ရုပ်ရှိသည်။
Sonic Jungle စွန့်စားမှု, Sonic တောတွင်းအတွက်လက်နှင့်အတူစခန်းချသည်, ဒါပေမယ့် Sonic သူတပ်၌တပြင်လုံးကိုတစ်နေ့အိပ်ပျင်းရိဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လက်ပျင်းစရာရရှိသွားတဲ့နှင့်သူ့ကိုတစ်လျှောက်အရွက်။ အခုတော့ Sonic ကိုယ်ရောစိတ်ပါအမိကျောင်းကိုတိုက်နှင့်လက်ရှာပါ။
စူပါ Sonic အပြေးသမား
အဖြူကောင် biker ဂိမ်း Sonic
Sonic Hedgehog ၏ရောင်စုံကမ္ဘာကမှကြိုဆိုပါ၏! ဒီအရူးဆိုင်ကယ်ဂိမ်းသင်တစ်ဦး bumpy ရှုခင်းကိုဖြတ်ပြီးမောင်းနှင်ဖို့နဲ့သင်တို့သည်ဤမျှထွက်စောင့်ကြည့်ကျော်လှန်နိုင်ပါတယ်လိုအပ်ပါတယ်ဒီ Sonic ဂိမ်းအတွက်, မိမိအမော်ကွန်းကမ္ဘာ thru သင်ကြာ! သငျသညျကိုအကောင်းဆုံး Sonic biker ဖြစ်ပါသလား ကံကောင်းပါစေ!
Sonic တစ်စကိတ်ကို ယူ. စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် adrenaline ၏ search အတွက်တောင်စောင်းပေါကျကှဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်, ဒါပေမယ့်သူလည်းဒီဂိမ်းကိုအောက်ပါအလွန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမှတ်ဂိုးသွင်းရန်သင့်အားတတ်နိုင်သမျှသလောက်ကိုရွှေကွင်းကိုလည်းဖမ်းပြီးဖို့မေ့လျော့တော်မနိုင်
ဒါဟာဟယ်လိုညပါပဲ။ Sonic ကသူ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ်ပျော်စရာရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုသူ၏အလမ်းပေါ်မှာရှိသမျှအတားအဆီးကိုရှင်းလင်းဖို့ကူညီပါ။ ပိုပြီးပျော်စရာအဘို့အအလယ်၌ရမှတ်များနှင့်စက်ဘီးစုဆောင်းပါ။ ကစားရန်မြှားခလုတ်များကိုအသုံးပြုပါ။
Sonic Xtreme ထရပ်ကား
Sonic ကျွန်းအနှံ့လက်စွပ်ကိုစုဆောင်းဖို့ထရပ်ကားစီးဖြစ်ပါတယ်။ သူကကျွန်းပေါ်မှာကျဉ်းမြောင်းနှင့် cracky လမ်းပေါ်တွင်ထရပ်ကားကိုမောင်းဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်။ တစ်ချိန်ချိန်တွင်, Sonic ပင်ကုန်းပေါ်မှာကုန်တင်ကားစီးဖို့ရှိသည်။ သူ့ကိုဖြတ်ကူးနိုင်ရန်အတွက်ကောင်းစွာထရပ်ကားကိုထိန်းချုပ်ကူညီပါ
Mario Sonic ကမ္ဘာမှာ Bros
Sonic ကမ္ဘာ့ဖလားအခုတော့ SEGA Sonic ဂိမ်းအပေါ်အခြေခံပြီးမြင့်မားလူကြိုက်များဂန္ပလက်ဖောင်းတစ် flash ကိုကိုယ်ပွားအတွက်မာရီယို Bros Play ။
Mario & Sonic ဖုတ်ကောင်လူသတ်သမား
မာရီယို & Sonic Zombie Killer ဂိမ်း။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ထိခိုက်တယ်ပြီးနောက်ကွဲပြားခြားနားသောဒါပေမယ့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဂိမ်း, bowser တပ်မတော်ဖုတ်ကောင်သို့လှည့်တော်မူပြီ။ စစ်တပ်ကဖုတ်ကောင်သို့လှည့်ပြီးနောက်ပိုအစွမ်းထက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
Sonic စီးနင်း 2
အပေါ် bang! Sonic စီးနင်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာစွန့်စားစီးနင်းနှင့်အတူပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပျော်စရာရှိသည်နှင့်ဆင်းကျသွားမရှိဘဲဒင်္ဂါးပြားကိုစုဆောင်းပါ။ ထွက် Watch, လမ်းကြောင်းဖြောင့်သည်မဟုတ်, ထို့ကြောင့်သတိပြုရကြမည်။ သငျသညျအသီးအသီးသည့်အဆင့်ပြီးမြောက်ရန်သုံးအခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ!
ကွန်ပျူတာအနိုင်ရမှ Sonic မြင့်မားရမှတ်ကိုကူညီပါ
Sonic sahara သဲကန္တာရစိန်ခေါ်မှု
Sonic sahara သဲကန္တာရအပေါ်စိန်ခေါ်မှုများကျော်လွှားနှင့် Sonic ကူညီနဲ့အတူအားလုံးကို item တစ်ခု get ရမှတ်များကိုစုဆောင်းပါ။
အားလုံး Sonic သူရဲကောင်းများခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးပါ။
အာဏာကိုအာ့ရအစဉ်အမြဲဤ action pack ကိုသေနတ်ပစ်ဂိမ်း Sonic က Sky သက်ရောက်မှု၌သင်တို့၏လမ်းလာအဘယျသို့ဖကျြဆီးရနျသူမြား၏အဝင်လှိုင်းတံပိုးရိုက်, သင့်သေနတ်များ Upgrade နှင့်အသစ်အဆင့်ဆင့်သော့ဖွင့်။
စူပါ Sonic motobike
Sonic ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးမပါဘဲအားလုံးအဆင့်ဆင့်၏အဆုံးအားမိမိအသစ် motobike စီးကိုကူညီပါ။ တတ်နိုင်သမျှကွင်းကိုစုဆောင်းဖို့ကြိုးစားပါ။
Sonic ကျောဖြစ်ပါသည်, ထိုစကိတ်စီးပေါ် Get နှင့်ရဲ position နဲ့ဆက်ဆံတတ်နိုင်သမျှအများအပြားရမှတ်ဂိုးသွင်းပယ်ဆွဲထုတ်။ ဒဏ္ဍာရီဓားအဆုံးစွန် Sonic စကိတ်စီးဖြစ်လာအသစ် position နဲ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အောင်မြင်မှုများကို Unlock ။
အမျက်ထွက် Sonic 2
Angry Birds ဂိမ်း Sonic တွေ့ဆုံရန်တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားမလဲ ရယ်စရာရူပဗေဒဖွဲ့စည်းပုံမှာခေါက်စွန့်စားမှုဂိမ်းကိုဖန်ဆင်းသည်။ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်အဆင့်အနိုင်ရဖို့အားလုံးကိုဏန်းသတ်ပစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဆုကြေးငွေအချက်များဂိုးသွင်းရန်အဖြစ်တာကွင်းကိုသင်တတ်နိုင်သလောက်စုဆောင်းဖို့ကြိုးစားပါ။
ဒါကြောင့်သင်အစဉ်အဆက်တစ်ဘီးဆိုင်ကယ်စီးနင်းကြိုးစားခဲ့ပြီ ... မျှပြီးတော့ဒီမှာဂိမ်းတစ်ခုမှာဘီးပြိုင်ပွဲသည်ဆိုပါက။ သင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးကစားသမား Ben10, မာရီယို, Sonic နှင့် Ash ကိုရွေးချယ်ပြီးတဘီးဆန္ဒပြပွဲမျိုးနွယ်အနိုင်ရနှင့်အသစ်အဆင့်ဆင့်သော့ဖွင့် ... ခံစားကြည့်ပါ!
ထိပ်ပေါ်မှာနဖူးစည်းစာတမ်းရှိကြောင်း Sonic မှမြကယ်နှုတ်တော်မူ။ အမြသို့မဟုတ်ကယ်ဆယ်ရေးဘောလုံးကဏန်းနဂါးကိုထိမခံပါနဲ့။
Sonic ကမ္ဘာ့ဖလားနဂါးလူနေမှုသုံးမျိုးရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဘယ်မှာသုံးကွဲပြားခြားနားသောဤလောကသို့ကွဲပြား Mario ကမ္ဘာ accidently.The မာရီယိုသို့ teleport
တပ်များ Bros သေစားသေစေသော
ဒီအံ့သြစရာများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဂိမ်းထဲမှာသင့်ရဲ့အဆိုးဆုံးရန်သူများကိုရင်ဆိုင်ရဖို့စူပါမာရီယိုနှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများ Sonic, မြည်းဟောင်ကောင်ကိုကူညီပါ။ သူတို့အလှည့်ကွက်ပြုကြလိမ့်မည်နည်း ဒါကသာထူးနိုင်။
Sonic ATV ခရီးစဉ် 2
သင့်ရဲ့ ATV ဖမ်းပြီး Sonic အ Arcade သူရဲကောင်းနှင့်အတူမြန်သင်တတ်နိုင်သလောက်စီး။ သင်တို့ရှိသမျှသည် 8 အဆင့်ဆင့်ဖြည့်စွက်ကြလိမ့်မည်နည်း
Sonic ထရပ်ကား 2
Sonic သူတို့အားကျော်ကြားသောရွှေကွင်းကိုလည်းစုဆောင်း, အခြားထရပ်ကားခရီးထွက်သည်။ သူ၏လမ်းအပေါ်သူ့ကိုကူညီပါသင်အဆင့်ဆင့်၏အားလုံးဖြည့်စွက်နိုင်လျှင်ကြည့်ရှုပါ။
Mario & Sonic ဂျက်စွန့်စားမှု
ဒီအခမဲ့အွန်လိုင်းဂိမ်းထဲမှာမာရီယိုနဲ့ Sonic မိုဃ်းကောင်းကင်၌အတူတကွတစ်ဦးစွန့်စားမှုအပေါ်သွားဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကမာရီယိုကို pilot.However သည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးဂျက်လေယာဉ်ပေါ်အတူတူပျံသန်း, လမ်းအပေါ်, သူတို့ရဲ့ destina ရောက်ရှိမှမာရီယိုနဲ့ Sonic ရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားနေကြသူ Bowsers စစ်တပ်ရှိပါတယ်
Sonic အဖြစ်ဝေးတတ်နိုင်သမျှ run ဖို့ကိုကူညီပါ, ဒင်္ဂါးပြားကိုစုဆောင်းနှင့်အာဏာ-ups ရဆုကြေးငွေကိုရရှိရန်နှင့်အသစ်ကမ္ဘာ Unlock ။
Mario ဎ Sonic
မာရီယိုနဲ့ Sonic မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာကိုဝင်ရောက်ကူညီပါ။ ထွက်ပေါက်တံခါးများကိုသော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်နောက်လာမည့်အဆင့်အထိဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်သော့ကိုရှာပါ။ သငျသညျကန့်သတ်ထားအချိန်ရှိသည်, ဒါကြောင့်မဖြုန်းတီးပါနဲ့။
Sonic moto စွန့်စားမှု
တစ်ဦးကအပြည့်အဝ Sonic ပြန် moto စွန့်စားမှုနှင့်အတူဖြစ်ပါတယ်ပညတ်တော်မူ၏။ သင့်ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်သင့်ရဲ့စက်ဘီးကိုထိန်းချုပ်ဖြင့်သင်၏လမ်းပေါ်တွင်အတားအဆီးကိုဖြတ်ကူးရန်ဖြစ်ပါသည်။ မြင့်မားသောဂိုးသွင်းဖို့ပိုအချက်များစုဆောင်းပါ။ တစ်ပျော်စရာစီးနင်ရှိသည်!
Sonic bowser ကနေသူ့အဟောင်းများကို PAL မာရီယိုကယ်တင်ဖို့ရန်အမှိုကျနိုငျငံတျောမှဦးတည်နေပါသည်! အားလုံး bowsers minions သတ်ပစ်ရန်သင့်ဒုံးပျံ launcher ကိုသုံးပါ ...